Xog: Xasan oo seedigii u magacaabaya guddoomiyaha GOBOLKA BANAADIR - Caasimada Online
Home Warar Xog: Xasan oo seedigii u magacaabaya guddoomiyaha GOBOLKA BANAADIR
Xog: Xasan oo seedigii u magacaabaya guddoomiyaha GOBOLKA BANAADIR
Muqdisho (Caasimada Online) – War aan goordhaw ka helnay xarunta Madaxtooyada ayaa waxa ay sheegayaan in ay halkaas ka dhaceen wadahadaladii ugu danbeeyay ee lagu magacaabi lahaa Gudoomiyaha Maamulka Gobalka Banaadir.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa xalay waxa uu kullamo gooni gooni ah la qaatay qaar ka mid ah musharaxiinta u taagan in ay xilka ka badalaan Gudoomiyaha Gobalka Banaadir Maxamuud Axmed Nuur Tarsan.
Xubnaha u la kulmay Xasan oo xalay joogay madaxtooyada ayaa waxa ay kala yihiin:- Xasan Maxamed Xusen “Muungaab”, Eng. Nuune, oo horey xilka usoo qabtao iyo Liibaan Leyte, oo dhammaantood xilkan doonaya.
Afhayeenka madaxweynaha Eng. Yariisow, ayaa sidoo kale ka mid ah xubnaha xilkan loolanka adag ugu jira, kana codsaday madaxweynaha inuu u magacaabo.
Waxaa sidoo kale jira nin la magacuubo Yuusuf Jimcaale, oo ah seediga madaxweynaha, oo aan la kulmin madaxweynaha, balse la saadaalinayo in xilkaas isaga loo dhiibo doono.
Yuusuf Jimcaale, waxa uu ka tirsan yahay xisbiga Damu-Jadiid, waxaana qaraabo dhow la yahay mid ka mid ah xaasaka madaxweynaha, wuxuuna kasoo jeeda beesha Daa’uud.
Waxaa sidoo kale jira warar sheegaya in rajooyinka Muungaab aysan xumeyn, ayna u eg tahay in haddii aan la magacaabin Yuusuf, isaga uu noqon doono, balse ay u badan Yuusuf Jimcaale.
Si kastaba wixii kasoo baxa kulankaan hada socda kala socda wararkeena soo socdo haduu Alle idmo.